Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Tel Aviv mankany Dubai: sidina vaovao avy amin'ny Emirates
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany UAE
Nanambara ny Emirates androany fa hanomboka sidina tsy an-kiato isan'andro eo anelanelan'i Dubai sy Tel Aviv, Israely, manomboka ny 6 Desambra.
Tel Aviv sy Dubai dia hifandray amin'ny sidina vaovao tsy an-kiato isan'andro ataon'ny Emirates Airlines.
Ny sidina vaovao dia hampifandray an'i Tel Aviv amin'ny vavahady Emirates 30 manerana izao tontolo izao.
Emirates SkyCargo dia hanolotra entana 20 taonina isaky ny mandeha eo anelanelan'i Tel Aviv sy Dubai.
Tonga ity hetsika ity satria ny Emira Arabo Mitambatra sy Israely dia manohy mampivelatra ny fiaraha-miasa ara-toekarena lehibe kokoa amin'ny fampivoarana ny sehatra isan-karazany, ankoatry ny fampitomboana ny varotra eo amin'ny firenena roa tonta. Miaraka amin'ny sidina vaovao isan'andro, ireo mpandeha israeliana dia afaka mifandray soa aman-tsara, tsy misy olana ary mahomby mankany Dubai, ary amin'ny alàlan'ny Dubai mankany amin'ny tambajotran'ny zotra manerantany amin'ny toerana 120 mahery. Ny fandaharam-potoanan'ny sidina mankany/avy any Tel Aviv dia hanome fidirana mora amin'ny mpandeha mankany amin'ny toerana fialamboly lehibe any an-dafin'i Dubai toa an'i Thailand, ireo Nosy Ranomasimbe Indianina ary Afrika Atsimo, ankoatra ny hafa.
Fanampin'izay, ireo sidina vaovao ireo dia mampiditra fifandraisana mora miditra mankany Tel Aviv avy eo akaikin'ny vavahadin'ny Emirates 30 manerana an'i Aostralia, Etazonia, Brezila, Meksika, India ary Afrika Atsimo, izay fonenan'ny sasany amin'ireo vondrom-piarahamonina jiosy lehibe indrindra eran-tany. Ireo mpandeha avy any Etazonia mitady hijanona ao Dubai alohan'ny hidirany amin'ny diany mankany Tel Aviv dia afaka mahazo ny fonosana Dubai Stop Over, izay ahitana fijanonana any amin'ny hotely malaza eran-tany, fitsangantsanganana ary hetsika hafa.
Dubai koa dia manohy manintona ireo mpanao fialam-boly avy any Israely miaraka amin'ny lisitry ny traikefa tsy mitsaha-mitombo, ao anatin'izany ny fampiantranoana Expo 2020 Dubai izay nahasarika mpitsidika maherin'ny 2 tapitrisa tamin'ny volana voalohany. Isiraely dia mandray anjara amin'ny Expo 2020 Dubai miaraka amin'ny trano heva ao amin'ny firenena eo ambanin'ny lohahevitra 'mampifandray eritreritra – mamorona ny ho avy'.
Ny sidina vaovao an'ny Emirates dia hanamafy ny fifandraisana amin'ny vondrom-piarahamonina mpandraharaha any amin'ny firenena roa tonta, hamorona fantsona vaovao ho an'ny tambajotra sy hamoronana fahafahana fampiasam-bola manerana ny indostria. Miaraka amin'ny fanokafana ny fitsangatsanganana tsy misy visa eo amin'ny firenena roa tonta sy ny fanalefahana ny fameperana manerana ny tambajotra Emirates, ny serivisy vaovao dia hahafeno ny fitakiana fitsangatsanganana amin'ny ho avy miditra sy mivoaka ao Tel Aviv.
Ny zotram-piaramanidina dia hametraka ny fiaramanidina Boeing 777-300ER maoderina amin'ny fanamafisana kilasy telo, manolotra efitrano manokana ao amin'ny Kilasy Voalohany, seza fisaka amin'ny Business Class ary seza malalaka ao amin'ny Economy Class mba hanompoana ny mpanjifa amin'ny lalana manelanelana an'i Dubai sy Tel Aviv. Ny sidina isan'andro dia voalahatra hiainga ao Dubai amin'ny EK931 amin'ny 14:50 ora, tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Ben Gurion amin'ny 16:25 ora eo an-toerana. Ny sidina miverina EK 932 dia hiainga ao Tel Aviv amin'ny 18:25 ora, ho tonga any Dubai amin'ny 23:25 ora eo an-toerana.
Hahazo tombony amin'ny fiaraha-miasa amin'ny codeshare amin'ny flydubai ihany koa ny mpanjifan'ny Emirates. Ny codeshare dia manome ny mpandeha amin'ny fifandraisana fohy sy mirindra avy any Dubai mankany amin'ireo teboka manerana ireo tambajotra itambaran'ireo mpitatitra roa ireo, izay misy toerana 210 any amin'ny firenena 100 ankehitriny.
Ny zotram-piaramanidina dia hametraka ny fiaramanidina Boeing 777-300ER maoderina amin'ny fanamafisana kilasy telo, manolotra suite tsy miankina amin'ny kilasy voalohany, seza fisaka amin'ny Business Class ary seza malalaka ao amin'ny Economy Class.
Adnan Kazim, lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra, hoy ny Emirates Airline: “Faly be i Emirates manambara an'i Tel Aviv, iray amin'ireo vavahady manan-danja ao amin'ny faritra, ho toerana halehany vaovao indrindra. Miaraka amin'ny fanombohan'ny serivisy ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, Emirates dia hanome safidy bebe kokoa ho an'ny mpandeha mba hanidina tsara kokoa mankany Tel Aviv mankany Dubai. Tsy andrintsika ihany koa ny fandraisana ireo mpandeha ara-barotra sy fialam-boly maro kokoa avy any Israel mankany Dubai, ary mankany amin'ny toerana hafa amin'ny tambajotra Emirates.
Hoy izy nanampy: “Tianay ny hisaotra ny Emira Arabo Mitambatra sy ny manampahefana Israeliana noho ny fanohanan'izy ireo, ary miandry ny fotoana hanompoana an'i Israely izahay ary hanokatra fahatsinjovana bebe kokoa ho an'ny firenena roa tonta hanohizana ny fifandraisana matanjaka eo am-pampitomboana ny fandraharahana sy ny fanitarana ny fizahantany ato ho ato.”
Ho fanampin'ny fiasan'ny mpandeha, ny Emirates SkyCargo dia hanolotra entana 20 taonina isaky ny mandeha eo anelanelan'i Dubai sy Tel Aviv amin'ny Boeing 777-300ER hanohanana ny fanondranana fanafody, entana avo lenta, legioma ary zavatra simba hafa avy any Tel Aviv. Ny sidina koa dia antenaina hitondra ny famokarana akora sy singa, semiconductor ary parcels e-varotra ho any Israely.
Ireo mpandeha avy any Israely dia afaka miandrandra ny hiaina ny serivisy nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny Emirates sy ny vokatra mitarika amin'ny indostria eny amin'ny rivotra sy eny an-kianja manerana ny kilasy rehetra, miaraka amin'ny sakafo ara-tsindrimandry avy amin'ny faritra sy zava-pisotro maimaim-poana, ary koa ny safidy sakafo kosher ao anaty sambo. Ny an'ny airline ranomandry Ny rafi-pialam-boly an-tsambo dia manolotra fantsona 4,500 mahery amin'ny fialam-boly an-takina amin'ny fiteny 40 mahery, ao anatin'izany ny sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra ary tranomboky mozika midadasika miaraka amin'ny lalao, boky audio ary podcast.
Naverin'ny Emirates tamin'ny laoniny tanteraka ny tambajotrany Afovoany Atsinanana ary manidina any amin'ny tanàna 12 manerana ny faritra amin'izao fotoana izao.
Tel Aviv no tanàna lehibe indrindra sy be mponina indrindra ao Israely, ary foibe ara-toekarena sy teknolojia ho an'ny firenena. Nahasarika mpitsidika maherin'ny 4.5 tapitrisa ilay tanàna tamin'ny taona 2019, hoy ny minisitry ny fizahantany israeliana. Tel Aviv dia malaza amin'ny tora-pasika madio, ny sehatry ny sakafo miroborobo, ny kolontsaina ary ny fanangonana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny tranobe Bauhaus fotsy misy sonia 4,000, izay lasa Lova Iraisam-pirenena UNESCO. Foiben'ny siansa sy ny teknolojian'ny mpisava lalana ihany koa ny tanàna, miaraka amin'ny tontolon'ny fandraharahana matanjaka sy fanombohana izay namokatra fanavaozana sy vokatra noraisina manerana an'izao tontolo izao sy manerana ny sehatra maro.
Ireo mpanjifa mandehandeha sy miverina any Israely dia asaina manamarina ny fepetra farany amin'ny dia Eto